'साहित्यपोस्ट उत्तम काव्य पुरस्कार' संवाद; जिल खाइरहेकी एक्काइसौँ शताब्दी | साहित्यपोस्ट
कविता लेख्दै जाँदा पुरस्कार तथा सम्मानहरू प्राप्त गर्नु कुनै खासै ठूलो उपलब्धी हो भन्ने मलाई लाग्दैन - शान्ति प्रियवन्दना
साहित्यपोस्ट	 प्रकाशित २५ जेष्ठ २०७९ २०:०१
साहित्यपोस्टको संयोजन तथा लोकप्रिय गीतकार एवं कवि उत्तम भौकाजीको सौजन्यमा स्थापित “साहित्यपोस्ट उत्तम काव्य पुरस्कार– २०७८”का लागि ९ काव्यकृतिको छनौट भइसइसकेको छ । यसै सन्दर्भमा सर्वोत्कृष्ट एक काव्यकृतिको घोषणा गर्नुअघि उत्कृष्ट ९ कृतिका स्रष्टाहरूसँग पुरस्कारकै पेरिफेरिमा रहेर संवाद गरिएको छ । यस संवादको मुख्य उदेश्य भनेको “साहित्यपोस्ट उत्तम काव्य पुरस्कार”लाई लिएर उहाँहरूको विचार जान्नु र कृतिको बारेमा पाठकलाई लेखकबाटै थाहा दिनु हो ।
यहाँ उत्कृष्ट नाैमा छनोट भएको कवितासङ्ग्रह ‘जिल खाइरहेकी एक्काइसौँ शताब्दी’की स्रष्टा शान्ति प्रियवन्दनासँगको संवाद प्रस्तुत गरिएको छ ।
तपाईँको पहिलो काव्यकृति “साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार”का लागि छनोट भयो । कस्तो अनुभूति गरिरहनुभएको छ ?
यो वर्ष कविता विधामा धेरै किताबहरू निस्किएका छन् । मेरो पहिलो कृति साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कारको छनोटमा परेको कुराले खुसी लागेको छ । खुसी लाग्नु स्वाभाविक पनि हो । सर्जकहरूलाई स्वस्थ समालोचना, पुरस्कार र सम्मानहरूले जिम्मेवारी बोध गराउँछ । आगामी दिनहरूमा लेख्नको लागि थप अभिप्रेरणा दिन्छ । यसरी मेरो कृति छनोटमा पर्नुभनेको कविताको क्षेत्रमा मेरा कविताहरूले पुर्याएको योगदानभन्दा पनि मसँग काव्य विधामा भएका क्षमताले आगामी दिनहरूमा आधुनिक नेपाली कविताको क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ र नेपाली कवितामा थोरै भए पनि योगदान पुर्याउनु पर्छ भनेर कृति छनोटमा पारिएको हो भन्ने लाग्छ ।
“साहित्यपोस्ट उत्तम काव्य पुरस्कार”का लागि नौ कृति छनोट भएका छन् । अर्थात् तपाईँका प्रतिस्पर्धीका रुपमा बलिया कृतिहरु छन् । तपाईँले पुरस्कार जित्नु वा नजित्नुले तपाईँको साहित्यिक यात्रामा के अर्थ राख्छ ?
मैले कविता लेखन यात्रा सुरु गर्दैगर्दा एकदिन पुरस्कार जित्छु भनेर सुरु गरेको पटक्कै होइन । निरङ्कुस व्यवस्थामा जस्तो कुनै व्यक्ति र सत्ता विशेषको स्तुतिगान वास्तविक स्रष्टाहरूले लेख्ने पनि होइन मेरा कविताहरूलाई मन पराउने आफ्नै खालका पाठकहरू हुन सक्छन् । यिनै पाठकहरूको सुझाव, आलोचना र आफ्नै साधनाले सिर्जनमा निखारता आउँछ र त्यो निखारता ल्याउँदै जानु पनि पर्छ । कविता लेख्दै जाँदा पुरस्कार तथा सम्मानहरू प्राप्त गर्नु कुनै खासै ठूलो उपलब्धी हो भन्ने मलाई लाग्दैन । मेरा कविताहरूले समाज परिवर्तनमा के कस्तो भूमिका खेलेका छन् र खेल्न सक्छन् भन्नुचाहिँ ठूलो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि कर्म गदै गएपछि फल मिल्छ भन्ने हो । मेरो कवितासङ्ग्रह बजारमा आइसकेपछि विष्णु आचार्य भन्ने एक जना दाइले मैले केही वर्ष पहिले फेसबुकमा पोस्ट गरेको कविता सम्झाउँदै भन्नुभएको थियो – तिमीले त्यो कविता यो कवितासङ्ग्रहमा समावेश गरेकी रहेनछौ, मलाई त्यो कविता औधी मनपरेको थियो । मैले त्यति नै बेला एउटा ठूलो पुरस्कार पाएको अनुभव गरेको थिएँ । “साहित्यपोस्ट उत्तम काव्य पुरस्कार”का लागि छनोटमा परेका सबै कृतिहरू बलिया छन् । यो पुरस्कार मैले पाउँछु पाउँदिनँ, त्यो मलाई थाहा छैन । पुरस्कार पाए पनि नपाए पनि, मेरो कविता लेखनको यात्रा पटक्कै रोकिने छैन ।
“जिल खाइरहेकी एक्काइसौँ शताब्दी” लेख्नुको तपाईँको मुख्य उदेश्य के हो ? कविता लेखनको अनुभूतिबारे बताइदिनुहोस् न !
“जिल खाइरहेकी एक्काइसौँ शताब्दी”मा समवेश भएका अधिकांश कविताहरू सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित छन् । मैले सामान्य विषयवस्तु जो तपाईँ हाम्रा अगाडि हुन्छन्, त्यस्ता विषयवस्तु र घटनाहरूलाई आफ्ना कविताहरूमा स्थान दिएको छु । हाम्रो समाजमा विद्यमान सामाजिक विसङ्गतिहरू जस्तो जातीय विभेद, लैङ्गिक विभेद, वर्गीय विभेद, धार्मिक अन्धविश्वास, रुढीवादी परम्परा आदिलाई कविताको माध्यमबाट उठान गर्नु र तिनै विभेदका सिकार भएकाहरूसामु पुर्याउनु मेरो कृति प्रकाशनको उदेश्य हो ।
साहित्यपोस्ट	 ३० जेष्ठ २०७९ २०:०१
‘साहित्यपोस्ट उत्तम काव्य पुरस्कार’ संवाद; आकाश…
साहित्यपोस्ट	 २६ जेष्ठ २०७९ २०:०१
धेरै अघिदेखि उत्कृष्ट कविताहरू लेख्दै आए पनि ढिला गरी सङ्ग्रह ल्याउनु भयो । कारण के होला ?
कविता लेख्दै आएको भए पनि मलाई कवितासङ्ग्रह निकालिहाल्नु पर्छ भन्ने हुटहुटी कहिल्यै लागेन । मलाई जहिले पनि मेरा कविताहरू अझै परिष्कृत हुनपर्छ । विचार र कलाको संयोजनमा अझै जोड दिनुपर्छ भन्ने लागिरह्यो । त्यसको अलावा मेरा केही व्यवहारिक कठिनाइहरू पनि थिए जसको कारणले कृति प्रकाशनमा ढिला भएको हो । भन्नेहरूले कृति प्रकाशनमा ढिला भयो भनेका छन् तर मलाई यही उपयुक्त समय रह्यो भन्ने लागेको छ ।
“जिल खाइरहेकी एक्काइसौँ शताब्दी”ले यो पुरस्कार पाएको खण्डमा प्राप्त आर्थिक राशिले के गर्नुहुन्छ होला ?
प्रतिस्पर्धामा अरू पनि बलिया प्रतिस्पर्धीहरू छन् । यो पुरस्कार मैले नै प्राप्त गर्न सफल हुन्छु भन्ने छैन त्यसैले पुसस्कार पाएको खण्डमा प्राप्त आर्थिक राशि के गर्ने भन्नेतिर मेरो पटक्कै ध्यान गएको छैन । तर आजका दिनसम्म सजिलो अर्थमा भन्नु पर्दा लेखेर कमाएको पैसा लेखपढकै क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको छु । किताब किन्नमै यस्ता पैसाहरू खर्च भएका छन्, यो पुरस्कार प्राप्त भएमा साहित्यकै क्षेत्रमा खर्च भने अवश्य हुनेछ ।
अन्त्यमा, भविष्यको साहित्यिक यात्राका योजनाहरू के के छन् ?
भर्खरै कृति प्रकाशन भएको छ सुझाब, सरसल्लाह आउने क्रम जारी छ । यो कृतिको समीक्षाले पनि भविष्यको साहित्यिक यात्रालाई गतिदिनको लागि पक्कै मद्धत गर्ने छ भन्ने मलाई लाग्छ । आगामी साहित्यिक यात्राका योजनाहरू बनाएको छैन तर लेख्नेक्रम निरन्तर रहने छ । मेरो जीवनमा अब फुर्सदका दिनहरू आएका छन् । आगामी दिनहरूमा सिर्जनात्मक कार्यमा आफूलाई व्यस्त भने अवस्य राख्ने छु ।
२५ जेष्ठ २०७९ २०:०१
लघुकथा प्रतियोगिताकाे सैँतीसौँ चरण: तारा श्रेष्ठकाे ‘आखिर भोट कसलाई ?’ विजयी
'पहाड र लमतन्न समुद्र'माथि अन्तरविमर्श
जिल खाइरहेकी एक्काइसौँ शताब्दीशान्ति प्रियावन्दनासाहित्यपोस्ट उत्तम काव्य पुुरस्कार
कविताः अक्षरहरूको नयाँ सहर